5 Talo in maskaxda lagu hayo dhiska aad Library
Waxaa inta badan waa dareen xun marka aad hesho in la ogaado in maktabadda Lugood aad ayaa ku burburtay sababta oo ah hab khaldan. Waxaad laga yaabaa in dib-u-soo bixi heesaha oo dhan iyo haddii aadan haysan dib ka soo, waxaa laga yaabaa in ay dhibaato kugu tahay. Lugood sida muuqata waa clueless marka ay timaado u dhiska maktabadda, iyo sidoo aad u baahan tahay qalab xirfadeed in.
TunesGo saamaxaya kuwa isticmaala in ay dib u dhis ay Library ka xoq. Tani waa muujinta a oo aan ku bixiyaan Softwares badan halkaas. Hadda waxaad haysataa fursad aad ku dooranayso ka heeso ah oo aad rabto iyo adiga oo aan samayn.
Waxa aad u baahan tahay in aad maskaxda ku hayso inta u dhiska maktabadda, waa in aad u baahan tahay nidaamka maktabadda music aad marka hore ka dibna waxa ay u maareeyaan.
Inta badan dadka qabaa in dib u dhiska maktabadda qaadataa wakhti badan. Laakiin Dhab ahaantii ma aha. Inta badan dadka ka bixi nidaamka dhexe. Waxaad u baahan tahay si aad u hubiso in dib u dhiska ah ee maktabadda qaadan doonaan wakhtigiisa, laakiin waxaa fiican inaad ka baxdid nidaamka dhexe.
Hubi in ay ku xidhmaan qalab si sax ah inta aad reserved TunesGo. Degdeg ah ayaa taas oo u muuqata in kooxda uu gacanta midig waa waanada in aad wanaagsan si ay u tagaan la-dhiska ah ee maktabadda.
Waxa kale oo aad u baahan tahay in ay ku haay maanka waa in si dib u dhiska maktabadda, waa in aad xulan heeso ah oo aad rabto inaad sii. Haddii aad rabto in aad ka saarto dhowr heeso badan waxaa wanaagsan in uncheck ikhtiyaar in.
Waxa la soo dhaafay oo aad u baahan tahay in maskaxda lagu hayo in aan ka weynayd kuwa la playlist ah kaas oo ka yimaadaa ay sabab u tahay waxaa ka mid ah waa. Waa natiijada habkan oo dhan.
Sidee inay la midowdo maktabadaha Lugood
Sida loo raaxayn maktabadda Lugood
> Resource > Lugood > 5 Talooyin in maskaxda lagu hayo dhiska Your Library